Kuthetha ukuthini ukuphupha indlu? Fumanisa i-Intanethi ▷ ➡️ kwi-Intanethi
Ukuphupha ikhaya kuneentsingiselo ezahlukeneyo kwaye kuya kufuna ukuba umntu ophuphayo akhumbule ngokupheleleyo iinkcukacha ezininzi kangangoko ukuze enze ingcaciso eqinisekisayo yemeko leyo.
Indlu ngokwayo inomdla omnandi kakhulu kwiinkcubeko ezahlukeneyo zehlabathi, oko kukuthi, indawo ekhuselekileyo. Ke ngoko, indlu sisalathiso sethu, indawo yethu yokuqala kuyo nayiphi na injongo esizibekele yona ebomini.
1 Ukuphupha ekhaya
2 Uyayibona indlu le ubuhlala kuyo?
3 Ngaba indlu ayinanto?
4 Ngaba uphuphe ukuba ukwindlu engaziwayo?
5 Ngaba waphupha ngendlu xa uthatha umhlalaphantsi?
6 Ngaba waphupha indlu idilizwa?
Ukuphupha ekhaya, ke ngoko, kuyakufuna ukuba sikhumbule iinkcukacha ezibalulekileyo zendlu esizibonayo, oko kukuthi, ukuba yeyethu, ukuba ibintsha, ukuba inkulu, ibikuphi, njl. Isishwankathelo, naziphi na iinkcukacha zingabaluleke kakhulu ekutolikeni ngokuchanekileyo.
Uyayibona indlu le ubuhlala kuyo?
Ngokubanzi, xa siphupha ngendlu esihlala kuyo, ngumqondiso ovela kwi-subconscious yethu ngengqondo yokubonisa umnqweno wethu wokuba kufutshane nosapho. Jonga ukuba ubungekho kude nezalamane zakho mva nje kwaye ucinga ngokuhlela ixesha elingakumbi ngazo. Ukuba indlu injengexesha lokugqibela ukuyibona ngokwenyani, oko kunokuthetha ukuba umntu okude uza kubuya ekwenza wonwabe kakhulu. Kodwa ukuba indlu ihanjisiwe, kusenokwenzeka ukuba kufuneka ubuyele apho uvela khona.
Ngaba indlu ayinanto?
Ukuba ephupheni lakho indlu ibingenanto, luphawu lokuba kufuneka uphonononge ubuntu bakho, oko kukuthi, imibuzo ebukhali kwaye isondeleleneyo: ngaba ngokwenene uzinika ubudlelwane? Ngaba awuphathi umbuzo othile ngokukhuselekileyo? Ngaba awunanto engenanto kubudlelwane bakho nabahlobo kunye nabantu osebenza nabo? Ngapha koko, kulungile ukuba uzibuze le mibuzo kwaye utshintshe into ocinga ukuba iyimfuneko kwizenzo zakho zemihla ngemihla.
Ngaba uphuphe ukuba ukwindlu engaziwayo?
Ukuba uphupha ukuba ukwindlu engaqhelekanga, naka enye inkcukacha: wayenjani? Icocekile kwaye intle okanye imdaka kwaye imbi? Ngokuba mhle uya kuba nokuchuma okukhulu kwezemali kwaye unokufuna nokuthenga ipropathi entsha. Ukuba kubi, kulungile ukuba ucinge ngokuhlaziya ipropathi yakho yangoku. Unokuba kolunye uhlobo lwengxaki kwaye awukhangeli.
Ngaba waphupha ngendlu xa uthatha umhlalaphantsi?
Apha akunamsebenzi nokuba yeyakho, umhlobo okanye umntu ongamaziyo. Ngokubanzi, oko kuthetha ukuba kufuneka uyilungiselele intliziyo yakho umntu omtsha oza kuza ebomini bakho kwaye uya kuvusa umdla omkhulu.
Ngaba waphupha indlu idilizwa?
Olu hlobo lwamaphupha lubonisa injongo yendalo yonke ukukuxwayisa ukuba ufuna indawo yokuhlala entsha, izingqinisiso ezintsha, nokuba indlela yakudala yokuphila iyafa. Kule meko, kufuneka sithathele ingqalelo ukuphela kobudlelwane obukhoyo (ngakumbi imitshato) kunye notshintsho olukhulu, olufana: nokunikezelwa kwemisebenzi kwamanye amazwe, sishiya usapho lonke ngasemva, utshintsho kumgangatho wokuphila onamandla amakhulu okuba ukutshintsha izindlu njengokuziqhelanisa, njl.